Wararka iyo Sheekooyinka Waxsoosaarka Dharka & Maqaarka by Alietc.com - Alietc.com
Waxa Looga Fiirinayo Soo Saarayaasha Wershadaha Grey Out ee ugu Fiican
Dharka ugu fiican ee baahidaada waa inaad doorataa alaab-bixiyaha ugu cawsan Australia. Alaab-qeybiyaha saxda ah ayaa amar gaar ah ka qaadan doona aag gaar ah oo ka mid ah gurigaaga ama xafiiskaaga waxayna sidoo kale awoodi doonaan inay ku siiyaan qalabka iyo qalabka saxda ah si aad u gaarto midabka aad rabto. Kuwani […]Read More
Raadinta Soosaarayaasha Dharka Guryaha Ugu Fiican
Waxaa jira dhowr shirkado wanaagsan oo alaab-qeybiyeyaal ah oo kaa caawin kara baahidaada dharka. Waa inaad ka taxaddartaa xulashada kuwa saxda ah si aad u hesho alaabada saxda ah. Alaab-qeybiyeyaasha ugu fiican ee dharka guryaha bixiya waxay soo bandhigaan alaabooyin badan oo gaar ah. Intooda badani waxay bixiyaan wax soo saar aad u tiro badan waxaana laga yaabaa inay…Read More
Sida Bixiyeyaasha Wershaduhu uga Bixin karaan Wasakhda Deegaanka
Waxaa jira shirkado badan oo dharka ka sameeya UK oo bixin kara dhar tayo sare leh. Si kastaba ha noqotee, waa wax iska caadi ah ganacsiyada inay ku daadiyaan qashinkooda dharka qaab aan deegaan ahaan ku habbooneyn. Shirkadaha qashinkaaga qaata oo dharka ka dhiga. Waxaa jira shirkado qashinkaaga kaa qaadi doona oo kaa rogi doona…Read More